Ogaden News Agency (ONA) – Maraykanka & Midawga Yurub oo Kawalaacsan Xaalada Qalafsan Ee Kooxda TPLF.
Warbixin xasaasi ah oo shalay soo baxday ayaa lagu sheegay in ay wadanka Maraykanka iyo Midowga Yurub ay walaac daran ka muujiyeen xaalada murugsan ee ay maanta ku sugantahay Itoobiya iyo sida ay kooxda TPLF ugu fashilmayso taladii wadanka.
Sida warbixintan lagu sheegay wadamada ree Galbeedka ayaa u kuur galay xaaladaha guud ee Africa taas oo ay ku sheegeen in ay aad ugu liitaan dhinaca maamul wanaaga waxayna wadamada ree Galbeedku carabka ku adkeeyeen in ay Itoobiya tahay meelaha ugu liita ee burburka qarka usaaran wax xal ah oo loo hayana aysan jirin.
Warbixintan ayaa sidoo kale lagu sheegay in ay ammaan xumida iyo kalsooni la’aanta shacabka ee TPLF lasoo daristay ay sabab utahay cadaadiska aan kala joogsiga lahayn ee ay kooxdu kuhayso dadka xukunkooda ku hoos
Sida warbixintan lagu sheegay Qawmiyada Oromada oo ah qiyaastii 40-milyan ayaa mudo badan kacdoon kawaday in kabadan 500 oo magaalo oo sida qoraalkan lagu sheegay ayna Itoobiya amaanka magaalooyinkaas gacanta kuhaynin xiligan xaadirkan ah.
Kooxda TPLF oo isku dayaysa in ay damiyaan kacdoonka Oromada ayaa sameeyay Urur lagu magacaabo OPDO oo magac u yaal ah, kaasoo ay ku sheegeen in uu matalo Qawmiyada Orimada ee ugu tarada badan guud ahaan shacabka Itoobiya, hase yeeshee madaxdii ururkaas ayaa sitoos ah utaageeray kacdoonada kasocda Gobollada Oromia oo meel daran maraya , maalimba maalinta kasi dambaysana sii xoogaysanaya.
Wadamada ree galbeedka ayaa sheegay mar haday madaxdii iyo shacabkii Oromia halkaas marayaan in aan xaalada ladaba qabatayn karin loona baahan yahay in xalka la abaaro. Sidoo kale wadamada ree Galbeedka ayaa sheegay in ay TPLF ka faa’iidaysan wayday maskaxdii ay siiyeen iyo taageeradii kala duwanayd ee ay u fidiyeen intii ay talada dalka gacanta ku hayeen.
Dhinaca kale wadamada ree Galbeedka ayaa sheegay in kacdoonka Oromada kuwo lamid ah oon ka yaraysanin uu kajiro Gobolada Axmaarada, Sidama, Gambela iyo Ogadenia. Waxayna xuseen in ay kacdoonadu marayaan meel aan waxba laga qaban karin.
Warbixinta ayaa lagu sheegay in uu culays daran Itoobiya kasoo wajahay dhinaca Eritrea kadib markay xukuumada TPLF oo indhaha shacabka Itoobiyaan ka ah iska jeedinaysa ay weerartay xuduuda Eritrea. Weerarkaas Itoobiya guulu kama raacin, waxayna dowlada Eritrea sheegtay in ay diyaar u yihiin weerar kastoo ay Itoobiyaanku sooqaadaan.
Dhinaca kale qaar kamid ah wadamada Jaamacada Carabta sida Masar, Sudan iyo Qadar ayaa sheegay in ay kala labo tahay dowlada Itoobiya xaalada ay ku sugantahay iyo waxa ay iska aaminsan tahay oo aad u kala fog.
Walaaca wadamada ree Galbeedka ayaa gaadhay in ay ka fikiraan qaabka Itoobiya loosiiyo dhaqaalaha waxayna sheegeen in ay qawmiyadaha kalee Itoobiya mudan yihiin in TPLF wax loola qaybiyo iyagoo ku saleeyay in ay yihiin qabaa’il isku mid ah oon mudan inay talada iyo maaraynta dalka u sinaadaan.
Sikastaba ha ahaatee xaalada kooxda TPLF ayaa hada maraysa in ay quwadaha dunidu gorfeeyaan isla markaana ay
walaaca intaas la’eg kasoo saaraan waxayna umuuqataa in uu caalamku maanta si cad udaawanayo siyaasad xumida iyo fashilka soo food saaray taliska Woyaanaha ee gabalkiisu dhacay.